Maitiro Ekuwedzera Yako Arhente Kuchengetedza Yako Google Bhizinesi Rondedzero | Martech Zone
Isu tanga tichishanda nevatengi vanoverengeka uko vashanyi veko vekutsvaga vakakosha pakuwana kwevatengi vatsva. Tichiri kushanda pane yavo saiti kuona kuti yakatarisana nenzvimbo, zvakakoshawo kuti tishande pane yavo Google Bhizinesi Rondedzero.
Nei Uchifanira Kuchengeta Google Bhizinesi Rondedzero
Mapeji eGoogle ekutsvaga enjini anopatsanurwa kuita zvikamu zvitatu.
Google Ads - makambani ekubheja pane ekutanga mashambadziro nzvimbo kumusoro uye pasi peji rekutsvaga.
Google Mepu Rongedza - kana Google ikaratidza nzvimbo seyakakodzera pakutsvaga, vanoratidza mepu nenzvimbo dzenzvimbo dzemabhizinesi.
Organic Kutsvaga Mhedzisiro - Webhusaiti mapeji mune yekutsvaga mhinduro.
Izvo zvisingazivikanwe nemakambani mazhinji ndezvekuti chinzvimbo chako pamepu hachinei nechekuita neyako webhusaiti optimization. Iwe unogona chinzvimbo, nyora zvinoshamisa zvemukati, shanda kuti uwane mahukama kubva kune akakodzera zviwanikwa ... uye hazvizokufambisa iwe pamepu kurongedza. Iyo mepu kurongedza inotungamirwa nemakambani ane achangobva kuitika, anowanzoitika zviitiko pane yavo Bhizinesi reGoogle zvinyorwa… zvakanyanya kuongororwa kwavo.
Sezvinoshungurudza sekuchengetedza imwezve chiteshi chekushambadzira, ichi chakakomba yekutengesa kwemuno. Patinenge tichishanda nekambani yemuno, zvakakosha kuti isu tivimbise kurongeka kweyeGoogle Bhizinesi rondedzero, kuichengeta ichivandudzwa, uye kukumbira wongororo sechiitiko chenguva dzose nezvikwata zvavo.
Maitiro Ekuwedzera Yako Arhente Kune Yako Google Bhizinesi Chinyorwa
Mutemo unoti kambani yega yega inofanira kumira ndeyayo kuva neyese zviwanikwa zvakakosha kubhizinesi ravo - kusanganisira dura ravo, account yavo yekutambira, mifananidzo yavo… Kubvumira iyo agency kana wechitatu bato kuvaka uye kubata imwe yeaya zviwanikwa iri kukumbira dambudziko.
Ini ndakamboshandira muzvinabhizimusi wemuno anga asina kuteerera izvi uye anga aine akawanda maakaundi eYouTube uye mamwe maakaundi enharaunda aakange asingakwanise kupinda. Zvakatora mwedzi kuteedzera pasi vekare makondirakiti uye kuvaita kuti vapfuure muridzi wemaakaundi adzokere kumuridzi. Ndokumbirawo usabvumire chero mumwe munhu kuve neyake midziyo yakakosha kwazvo kubhizinesi rako!
Google Bhizinesi haina kusiyana. Google ichaita kuti uongorore bhizinesi rako nenhamba yefoni kana nekutumira kadhi rekunyora kukero yako yekutumira nekodhi kuti iwe upinde. Paunenge iwe wanyoresa bhizinesi rako uye iwe wakagadzwa semuridzi ... ipapo unogona kuwedzera wako agency kana chipangamazano uyo anoda kukwidziridza nekugadzirisa chiteshi chako.
Paunosvika kuaccount yako, unogona kuenda kune Vashandisi kuruboshwe menyu, wobva wawedzera agency yako kana email kero yemubatsiri kuti uvawedzere kuaccount. Ive neshuwa yekuisa ivo ku meneja, kwete Muridzi.
Iwe unogona zvakare kuona pasi iro peji kune iko kudaidzwa kune Wedzera maneja kubhizinesi rako. Ichaburitsa yakafanana nhaurirano yekuwedzera vashandisi kubata peji.
Asi Wangu Agency Ndiye Muridzi!
Kana agency yako yatove muridzi, ita shuwa kuti ivo vanowedzera yako yemuridzi bhizinesi kero ye email yekusingaperi panzvimbo. Kana munhu iyeye (kana kugovera runyorwa) abvuma kuve muridzi, dzikisa basa revamiriri ku meneja. Usaisire izvi kusvika mangwana… hukama hwakawanda hwebhizinesi hunoenda zvisiri izvo uye zvakakosha kuti iwe uve wako bhizinesi 'zvinyorwa.
Ive neshuwa yekubvisa Vashandisi Mushure mekunge Vatoitwa!
Sezvakakosha kuti uwedzere mushandisi, zvakakoshawo kuti ubvise mukana kana iwe usisiri kushanda neiyo sosi.
Tags: wedzera agencywedzera mushandisigoogle bhizinesigoogle bhizinesi zvinyorwagoogle inonyora mushandisigoogle bhizinesi rangusei kutimaneja bhizinesi reGooglegadzirisa google bhizinesi rangumenejamepu kurongedzamuridzinyoka